Xisbiga Mucaaridka ah ee Waddani oo isu soo baxyo ballaadhan ka sammeeyay Gobollada iyo Degmooyinka | Berberanews.com
Home WARARKA Xisbiga Mucaaridka ah ee Waddani oo isu soo baxyo ballaadhan ka...
Xisbiga Mucaaridka ah ee Waddani oo isu soo baxyo ballaadhan ka sammeeyay Gobollada iyo Degmooyinka
Boorama(Berberanews):- Taageerayaasha Xisbiga mucaaradka ah ee Waddani ayaa isu soo baxyo balaadhan ka sameeyay gobollada iyo degmooyinka Jamhuuriyadda Somaliland. jamaahiirta ku labisan calanka liimiga ah ee xisbiga iyo boodhadh ayaa isu soo baxay fagaareyaasha magaalooyinka waaweyn iyo degmooyinka dalka waxaana kala qayb galay madaxda kala duwan ee xisbiga Waddani.
Sidaa waxa lagu sheegay War Qoraal ah oo Xisbiga Waddani ka soo baxay caawa, kaas oo nuqul ka mid ahi soo gaadhay Warbaahinta Berberanews.com, waxa uu u dhignaa sidatan:- “Taageerayaasha jibaysan ee cuddudooda muujinayay ayay madaxdu u jeediyeen khudbado ku saabsan qorshaha horumarineed ee xisbiga Waddani iyo dhibaatooyinka xukumadda Kulmiye dalka dhaxalsiisay.
“Gobolka Awdal waa gobol Qani ah oo u baahan in la kobciyo dhaqaalihiisa, si taas loo sameeyo waxaanu wax ka qaban doona Waddada Jabuuti iyo Boorama, oo kobcin doonto dhaqaalaha iyo isu socodka oo abuuri doonta shaqooyin badan oo dhalinyaradu hesho. Waxaanu wax ka qaban doona Madaarka Boorama oo sahli doona isu socodka. Waxaanu wax ka qaban doona xuduudka Jabuuti iyo Somaliland iyo arrinta Lawyo caddo ee ah cashuurta faraha badan ee laga qaado shacabka. Waxaanu dhimi doona cashuuraha laga qaado dekeddaha gobolka Awdal. Waxaanu kor u qaadi doona tacliinta Somaliland oo Awdal noqon doonto xarunta tayaynta tacliinta Somaliland,” Sidaas ayuu yidhi Musharrax Cabdiraxmaan Cirro.” Sidaa ayaa lagu yidhi Warka qoraalka ah ee naga soo gaadhay Xisbiga Waddani.
Previous articleKomishanka doorashooyinka oo dalka ku soo dhaweeyay Goobjoogayaal caalamiya
Next article“Muuse Biixi Culimadii iyo Odayaashii Ergada ugu Tegay wuxuu ku yidhi ..” Hoggaamiye Xirsi Cali X. Xasan